ကင်ညာနိုင်ငံ Lamu တွင် တရုတ်နိုင်ငံက တည်ဆောက်ထားသော ဆိပ်ကမ်း၌ ပထမဆုံးသင်္ဘော မကြာမီ ဆိုက်ကပ်နိုင်မည်ဟုဆို - Xinhua News Agency
Africa & Middle East World
ကင်ညာနိုင်ငံ Lamu ဆိပ်ကမ်းရှိ သင်္ဘောကျောက်ချရပ်နားရာ နေရာတစ်ခုအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
နိုင်ရိုဘီ ၊ မေ ၉ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ကင်ညာနိုင်ငံ ကမ်းရိုးတန်းမြို့ငယ် Lamu တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ တည်ဆောက်ထားသောပင်လယ်ဆိပ်ကမ်း၌ မေ ၂၀ ရက်တွင် ပထမဆုံး သင်္ဘော ဆိုက်ကပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ကင်ညာနိုင်ငံ အစိုးရက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ Communication Construction ကုမ္ပဏီက ကင်ညာနိုင်ငံ ဒုတိယ စီးပွားရေးဆိပ်ကမ်း၏ သင်္ဘောကျောက်ချရပ်နားရာနေရာ ဆိပ်ခံတံတားအမှတ် ၁ အား တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဆိပ်ခံတံတား အပိုင်းနှစ် နှင့် အပိုင်းသုံးတို့ကို အောက်တိုဘာလတွင် အပြီးတည်ဆောက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဘဏ္ဍာရေးဌာနက မေ ၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကင်ညာနိုင်ငံ Lamu ဆိပ်ကမ်း၌ တာဝန်ရှိသူများအား တွေ့ရစဉ်(ဆင်ဟွာ)
သင်္ဘော ဆိပ်ခံတံတား သုံးပိုင်း ပါဝင်သော ဆိပ်ကမ်း၏ ပထမအဆင့် တည်ဆောက်မှုအား၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ဆက်တွဲ အဆင့်များအား အစိုးရ-ပုဂ္ဂလိက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင် ပုဂ္ဂလိက ကဏ္ဍက ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့်နောက်ဆုံးတွင် ၁၀ ကီလိုမီတာ အရှည်ရှိသော ကမ်းတစ်လျောက်တွင် သင်္ဘောဆိပ်ခံတံတား၂၃ ခု ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဌာနထံမှ သိရသည်။
ကုန်ပစ္စည်း ကူးသန်းသွားလာမှုအား ကိုင်တွယ်ရန် ဆိပ်ကမ်း၏ စွမ်းဆောင်ရည်သည် ၂၀၃၀ခုနှစ်တွင် တန်ချိန် ၂၃ ဒသမ ၉ သန်းထိ အတင်အချ ပြုလုပ်နိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Vision 2030 ရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည့် ကင်ညာနိုင်ငံ၏ အမျိုးသား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းအောက်တွင် အထင်ကရ အခြေခံအဆောက်အဦ စီမံကိန်းဖြစ်သော Lamu ဆိပ်ကမ်းသည်ကုန်းတွင်းပိတ် တောင်ဆူဒန် နိုင်ငံ နှင့် အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတို့အား အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့်ချိတ်ဆက်ပေးသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်္ကြံတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
NAIROBI, May 8 (Xinhua) — A Chinese-built seaport in Kenya’s coastal county of Lamu will receive its first ship on May 20, the Kenyan government has said.
A flagship infrastructure project under Kenya’s national development blueprint, Vision 2030, the port of Lamu createsatransport corridor that links landlocked South Sudan and Ethiopia to the Indian Ocean. ■